KONGRESIN’NY VEHIVAVY ADVANTISTA : Vehivavy 8 000 mahery no tonga eto Mahajanga
Vehivavy advantista miisa 8 000 mahery no tonga eto Mahajanga hanatrika ny kongresin’ny vehivavy advantista eto amin’ny oseana Indiana. 11 août 2017
Nanomboka ny 9 aogositra teo io kongresy io ary tsy hifarana raha tsy ny 12 aogositra izao. Ny alarobia maraina no nosokafana tamin’ny fomba ofisialy tao amin’ny complexe sportif Ampisikina io hetsika io. Atao isaka ny telo taona izy io ary eto Mahajanga no nandray ny tamin’ity taona ity.
“Ny tanjon’ny kaongresy dia ny hampahery ny vehivavy eo amin’ny lafim-piainana rehetra”, hoy ny filohan’ny fikambanan’ny vehivavy advantista ny oseana Indiana. Betsaka ny hetsika atao mandritra io kongresy io, ka hisy ny asa soa, ny sosialy ary ny fanofanana isan-karazany. Hisy ny rindran-kira ara-pilazantsara, izay hatao eny amin’ny village touristique, ny fizarana lamba, bodofotsy, boky… Hisy koa ny fizarana sakafo ahitana vary 10 taonina, menaka sakafo 1000 litatra, ary savony 10 baoritra. Voalaza moa fa ny vadin’ny Filoham-pirenena no nanome ny ankabeazan’ireo fanampiana ireo.
Ny alakamisy kosa dia nisy ny fampirantiana sy fampahafantarana momba ny fahasalamana izay atao ao amin’ny gymnase, ary mbola mitohy anio hatramin’ny 12 ora. Maimaimpoana izy io, ary fampahafantarana momba ny fiasan’ny taona anatin’ny vatana, ny fo, ny taovam-pisefoana, ny lalandra sy ny tosi-dra, ohatra… ahafahana manatsara ny fahasalamana. Misy ny torohevitra omena maimaimpoana hatramin’ny otra. Ny lehiben’ny faritra Said Jaffar moa dia nisaotra sady nirary soa ireo vehivavy advantista ireo.